DEG-DEG: Xidiggii hore ee Manchester United Paul Scholes oo loo magacaabay xil Tababarenimo – Gool FM
(Manchester) 11 Feb, 2019 Laacibkii hore ee Khadka dhexe ee kooxda Manchester United iyo xulka Ingiriiska, Paul Scholes ayaa si rasmi ah loogu magacaabay xilka tababarenimo ee kooxda heerka labaad ee Ingiriiska ka ciyaarta ee Oldham Athletic.
Scholes ayaa saxiixay heshiis sanad iyo bar ah, waxaana kooxda Oldham si kumeel gaar ah tababare ugu ahaa Pete Wild tan iyo 27 December markii shaqada laga eryay Frankie Bunn.
Si walba oo ay ahaato Milkiilaha kooxda Oldham, Abdallah Lemsagam oo u dhashay dalka Morocco ayaa gartay in uu shaqadan u magacabo laacibka ku dhashay magaallada Oldham ee Paul Scholes, kaasoo xilkan hayn doona illaa 2020-ka.
Kulanka ugu horreeya ee Scholes uu macallin u noqon doono naadiga Oldham ayaa noqon doona ciyaarta Talaadada ay la dheeli doonaan kooxda Yeovil Town.
Oldham waxa ay kaalinta 14 kaga jirtaa kala sarreynta League Two, waxaana ay rajaynaysaa in Paul Scholes uu guulo u horseedi doono.